Imvelaphi kunye nembali yamandla elanga photovoltaic | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Imvelaphi kunye nembali yamandla elanga e-photovoltaic
Adriana | | Photovoltaic Solar Amandla, Umoya ovuselelekayo
Kule mihla I-Photovoltaic Energy yamandla Iya isiba yinto eqhelekileyo kwaye inezicelo ezininzi kwihlabathi liphela.
Ukuthatha ithuba Amandla esola Ayisiyonto intsha kodwa ukuba itekhnoloji ye iipaneli zelanga.
I-physicist u-Alexadre-Edmond Becquerel uthathwa njengomnye wabokuqala ukuqaphela isiphumo se-photovoltaic ngo-1839, oko kwafundwa amandla e-photovoltaic, umbane kunye nokukhanya kuvelise igalelo elibalulekileyo lezenzululwazi.
Eyokuqala iseli yelanga Yenzelwe kwaye yakhiwa ngo-1883 nguCharles Fritts ngokusebenza kwe-1%, eyayisebenzisa i-selenium kunye nocwecwe lwegolide njenge-semiconductor. Njengoko iindleko zayo zaziphezulu, zazingasetyenziselwa ukuvelisa umbane kodwa ezinye iinjongo.
Umanduleli weeseli zelanga ezisetyenzisiweyo namhlanje yile yenziwe kunye nelungelo elilodwa lomenzi nguRussell Ohl ngo-1946 kuba naye wasebenzisa I-semiconductor yesilicon.
Ezona seli zesilicon zale mihla ziyafana nezo zangoku zaphuhliswa ngo-1954 kwiiLebhu zeelebhu. Le nkqubela phambili kwezobuchwephesha ivumele iiseli zokuqala zorhwebo lwelanga kunye nokusebenza okukuko kwe-6% ukuba zivele kwintengiso ngo-1957. Zaqala ukusetyenziswa kwiziphuphutheki ezisemajukujukwini eSoviet Union naseMelika.
La amandla elanga Ukusetyenziswa kwekhaya bavela ngo-1970 kwikhaltyhuleyitha kunye neepaneli ezincinci zesilingi.
Kwakuku-80s kuphela apho ukusetyenziswa ngakumbi kwamandla elanga kwaziwa kwaye kwaqala ukusetyenziswa eluphahleni lweefama nakwiindawo ezisemaphandleni.
Ngokuphuculwa kwe ukusebenza kakuhle kwamandla iiphaneli zelanga kunye nokuhla kweendleko kuzenza zisetyenziswe ngokubanzi kwiindawo ezisemaphandleni nasezidolophini nakwimisebenzi yorhwebo ngokunjalo nakumakhaya abantu.
Amandla elanga aya kuba ngomnye weyona mithombo iphinda ihlaziyeke kule nkulungwane kuba ayingcolisi kwaye iphucule indlela esebenza ngayo, isenza ukuba kube lula ukuwusebenzisa ukwenza umbane ngobuninzi bemizi-mveliso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Photovoltaic Solar Amandla » Imvelaphi kunye nembali yamandla elanga e-photovoltaic
Ii-injini zangaphantsi kolwandle ezivelisa amandla